Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Javier Andres BECKER-MARSHALL as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Chile to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Javier Andres BECKER-MARSHALL as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Chile to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Javier Andres BECKER-MARSHALL as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Chile to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Javier Andres BECKER-MARSHALL joined the Chilean Foreign Ministry in 1979 and has served in various positions at the Chilean Embassies and Missions in Kenya, Austria, Colombia, Norway, the United States and Switzerland. From 2008 to 2011, he served as Minister Counsellor/ Deputy Head of Mission at the Embassy of Chile in Canada. Since 2011 to date he has been serving as Chilean Ambassador to the Kingdom of Thailand.
H.E. Mr. Javier Andres BECKER-MARSHALL will serve as concurrent Ambassador of the Republic of Chile to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ချီလီသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဟာဗီယာ အန်ဒရက်စ် ဘက်ကာ-မာရှယ်လ် အား ခန့်အပ်ရန် ချီလီသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှ အဆိုပြုလာခြင်းကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဟာဗီယာ အန်ဒရက်စ် ဘက်ကာ-မာရှယ်လ် သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ချီလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကင်ညာ၊ ဩစတြီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ နော်ဝေ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ရှိ ချီလီသံရုံးများနှင့် အဖွဲ့ရုံးတို့တွင် ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ချီလီသံရုံး၌ သံမှူးကြီး/သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချီလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
မစ္စတာ ဟာဗီယာ အန်ဒရက်စ် ဘက်ကာ-မာရှယ်လ် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ရုံးစိုက်နေထိုင်၍ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ချီလီ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်။